Isu takavamba muna 2009, isu tiri kambani inoona kure inosangana neindasitiri 4.0, inopa chigadzirwa dhizaini, mugadziri, kutengesa, uye sevhisi system.
Isu tinotarisa pamusiyano tepi yekugeza tepi yekugadzira mapepa ekushongedza, uye bato.Inowanikwawo kune zvimiti, memo pads & anonamira manotsi, makadhi ekunyora, simbi dzesimbi.
Washi vagadziri brand ine mukurumbira kune dzinopfuura 200 nyika.MOQ isingasviki 50 zvidimbu pasuru yezvinhu zvestock ine donhwe rekutumira sevhisi, kubatana kwakasimba nezviuru zvekugovera shamwari uye mutengesi.
Kuti tive nechokwadi cheiyo chaiyo, inoshanda uye nenguva, tinoshandisa online uye isina online smart warehouse, diki OEM.ODM odha iripo, isu tinopa imwe shopu bepa craft sourcing.kutamisa warehouse uye kits package sevhisi, isu tinogara tichichengeta zvivimbiso zvedu uye tichidzivirira kuvanzika kwevatengesi uye vatengi.
Chii Chinoita Isu
Mawashi matepi edu akagadzirwa kuti ave akanakisa.Izvi zvinoreva zvinhu zvakanakisa uye matanho chaiwo ekugadzira.
Ona dhizaini yako kana mapatani akadhindwa zvinoyevedza uchishandisa chete akanakisa madhindi uye inotungamira-kumucheto kugadzira zvivakwa.
Sechikwata chine simba, isu tinogara tiri kumberi kwewashi tepi dhizaini & maitiro ekugadzira kuitira kuti vatinoshanda navo vagare vari pamberi pemusika maitiro.
Vashandi Vane Unyanzvi